Lukaku oo si maldahan kaga hadlay arrimo ku saabsan mustaqbalkiisa – Gool FM
(England) 01 Agoosto 2019. Weeraryahanka reer Belgian ee Romelu Lukaku ayaa si maldahan kaga hadlay arrimo ku saabsan mustaqbalkiisa, xili ay saxaafada la xiriirineyso kooxaha Inter Milan iyo Juventus xagaagan.
Romelu Lukaku ayaa lagu soo waramayaa inuusan wax dhibaato ah ku qabi doonin luqada hadii uu u dhaqaaqo dalka Talyaaniga, wuxuuna muujiyay inuu ku hadlo luqada Talyaaniga.
Lukaku ayaa galay wadahadalo hordhac ah uu ugu biirayo kooxda Juventus, xili sidoo kale uu horaantii xagaagan la xiriiray Inter Milan, maadaama Antonio Conte uu ka dhigtay bar-tilmaameed buuxa.
Weeraryahanka reer Belgian ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Sky Sport Italia” wuxuu ku sheegay inuu ku hadli karo 7 luqadood ay ka mid tahay luqada Talyaaniga wuxuuna yiri:
“Walaalkay wuxuu ku ciyaaraa Italy, waxaana daawan jiray Sky Italy si aan u daawado kulamadiisa, sidaa darteed waxaan bartay xoogaa Talyaani ah”.
Si kastaba ha ahaatee Lukaku walaalkiis ee Jordan ayaa wuxuu u ciyaaraa kooxda Lazio tan iyo 2016 isagoo ka ciyaaraa qeybta daafaca bidix, iyadoo la filayo in labada kooxood ee Juvenus iyo Man United ay is dhaafsan doonaan xiddigaha Lukaku iyo Paulo Dybala.